Kooxda Liverpool oo la xiriirtay Wolves si ay ugala hadashado saxiixa mid ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Leicester City iyo Arsenal ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
“Saxiixa Ronaldo ayaa sabab u ah hoos u dhaca Juventus.” Saxafi reer Talyaani ah
Klopp oo si xiiso leh kaga hadlay wararka la xiriirinaya Mohamed Salah inuu ka tagayo Liverpool
Muxuu Andrea Pirlo ka yiri barbardhicii ay xalay kooxdiisa Juventus la gashay Hellas Verona?
Halyeey Liverpool ah oo kula taliyay Harry Kane inuu ka tago Tottenham Hotspur!
Man United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Milan, Inter & Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono SHANTA horyaal ee ugu waa weyn Yurub
Horudhac: Sheffield United vs Liverpool… (Xiddig muhiim ah oo usoo laabanaya Reds ciyaarta ay caawa martida yihiin)
Horudhac: Chelsea vs Manchester United… (Xiddigaha maqan, xaqiiqooyinka u gaarka ah kulankan iyo wax walba oo aad uga baahan tahay ciyaarta ugu weyn toddobaadkan EPL-ka)
Horudhac: Leicester City vs Arsenal… (Rikoorrada u gaarka ah kulankan oo u xaglinaya The Foxes)
Ronald Koeman oo ka hadlay guushii ay Barcelona ka gaartay kooxda Sevilla
Kooxda Liverpool oo la xiriirtay Wolves si ay ugala hadashado saxiixa mid ka mid ah xiddigaheeda
Haaruun June 7, 2020
(Liverpool) 07 Juun 2020. Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay la xiriirtay kooxda Wolverhampton Wanderers si ay ugala hadlaan suurtogalnimada ay ku heli karto adeegga Adama Traore inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Reds ayaa si xooggan loola xiriirinayay xiddigii hore ee Barcelona isbuucyadii la soo dhaafay, waxaana la fahamsan yahay in macallinka kooxda Merseyside-ka ee Jurgen Klopp inuu shaqsi ahaan ula xiriiray 24-sano jirkaan.
Sida laga soo xigtay The Mirror, kooxda haysata horyaalnimada Yurub ee Liverpool ayaa haatan u dhaqaaqeysa ‘Traore’, iyagoo ula soo xiriiray Wolves si ay u weydiiyaan su’aalo rasmi ah xilli ay isku dayayaan inay heshiis la gaaraan xagaaga.
Xiddigii hore ee xulka 21-sano jirrada Spain ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay Wolves intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2019-20, isagoo dhaliyay lix gool, isla markaana diiwaangeliyay 10 caawin 43 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan.
Liverpool ayaa si joogta ah loola xiriirinayay xiddigaha RB Leipzig ee Timo Werner isbuucyadii u danbeeyay, iyagoo isku dayaya inay horumariyaan qaab ciyaareedkooda weerarka, laakiin hoggaamiyaasha Premier League ayaa u muuqda inay guuldarro ka soo gaartay Chelsea tartanka loogu jiray xiddiga Jarmalka.
Qandaraaska uu haatan Traore kula joogo garoonka Molineux ayaa socon doona ilaa xagaaga 2023-ka.
"Alexander-Arnold wuxuu awood u leeyahay inuu noqdo kan ugu fiican Adduunka" – Cafu
Manchester United oo amaah ku direysa mid ka mid ah Weeraryahannadeeda haddii… (Mana ahan Odion Ighalo)